wararka maanta-arlaadii.net » Xarakada Alshabaab Oo markii Ugu horeesay Ka hadleen Arinka Mukhtar Robow abuu Mansuur.
Xarakada Alshabaab Oo markii Ugu horeesay Ka hadleen Arinka Mukhtar Robow abuu Mansuur.
Xarakada Alashabaab ayaa xalay markii ugu horoosay War kasoo saaray Arinka Sheekh Mukhtaar Robow Cali Abuu mansuur oo dhawan Kusoo biiray dawlada Federaalka Soomaliya Kaaso Hore ugu tirsanaa xarakada Alshabaab.
Afahayeenka Xarakada alshabaab Cali maxamud Raage Cali dheere Oo soo duubay Cajalada cod kaasoo Soconaayay Muda 40 daqiiqo ah ayaa ugu hadlay Arinka Mukhtar Robow Abu mansur iyo In la dar dar galiya Jihaadka ay wadaan .
Cali dheere ayaa sheegay in Robow intii uu iyaga ka tirsanaa uu xirir la lahaa Hayadao ajaanib Ah kuwaaso cadawga Soonalita ah isagoo ibtaa ku daray .in Sheeq mukhtaar uu Dhowr jrer magan galyo siiyay Rag Dambiyo kagalay Xarakada Alshaabaab kuwaasoo La rabay in la soo xiro .
Cali dheere ayaa Ku celceliyay in Robow uu harer maray nidaamka Alshabaab ayna ku kala tageen Caqiido wuxuna sgeegay in uuyahay nin aan u hogansami jiray nidamka u yaalo Xarakada alshabaab .
Cali dheer ayaa ugu damveyntii sgeegay in Robow uu ka midyahay raga kujira Dawlada Federalka soomaliya isagoo sheegay in Ay ka warqabaan in Maamul goboledyada qaar ay wadaan qorsha ah in Mareekanka Uu hub siiyo Robow si uu a Dagaalamo xarakada Alshabaab .
Sheekh mukhtaar Robow Abuumansuur ayaa dhamadkii sanadkii hore Kusoo biiray Dawlada federalja isagoo hore ugu tirsanaa Xarakada alshabaab isagoo sheegay in uy ka baxay alshabaab 3 sano ka hor .
Dagaalo Xalay ka dhacay Afgooye iyo Shabab Oo qabsadeen qaybo ka mid ah Afgooye
Heshiiskii Ahlu Sunada Gobolada Dhexe iyo Galmudug oo Lagu wado in la dhameestiro